Kedu ihe chapeau pụtara na ịgba ịnyịnya? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Usoro ịgba ọsọ French - otu esi edozi
Usoro ịgba ọsọ French - otu esi edozi
Kedu ihe chapeau pụtara na ịgba ịnyịnya?
''Okpu okpu'sụgharịrị' okpu 'mana ọ pụtara karịa. Ejiri iji gosi nkwanye ugwu maka mmadụ ibeonye na-agba ígwèmgbalị, mmezu ma ọ bụ mbọOkpu okpu! bu ihe akpuru akpu nke okpu. Nkwanye ùgwù na agbamume bụ àgwà ndị na-amasị anyịndị na-agba ígwè.
Na ngosipụta GCN na nso nso a, anyị gbalịrị ịchọta ụfọdụ n'ime ikpere ụkwụ kachasị agbago, nke kachasị elu n'ụwa. Dị ka ọ na-adị, ọtụtụ n'ime gị abịawo na ntụnye gị. Ọtụtụ na anyị kpebiri iwetara gị nhọrọ nke ndị ọkacha mmasị anyị.
Lee ha enweghị usoro ọ bụla. Enwere esemokwu ụfọdụ banyere ma ọ bụ n'ezie okporo ụzọ kachasị elu n'ụwa, mana ihe a na-apụghị ịgọnahụ bụ na otu a Wallin zuru oke na Dunedin, New Zealand abụghị maka ndị obi gwụrụ ike nwere obi ike iji were ya, mana abụọ n'ime ndị na-ekiri anyị, Chris Rushand Chris Harvey, ọ bụghị nanị na ọ rịgoro n’elu ma na-ese ya maka unu abụọ. Agha Baldwin Street maka ikike isi nke okporo ụzọ ọha na eze kachasị elu n'ụwa, Canton Avenue dị na Pittsburgh na USA.
O nweela aha obodo dịka akụkụ nke Dirty Dozen Ride, nke na-arịgo nnukwu ọnụ ọgụgụ ugwu ugwu Pittsburgh na-aga n'ihu. Maara nke ọma na ọ bụ ugwu dị larịị mgbe enwere akara aka n'akụkụ ụzọ ahụ, ọ bụ site na Jawa Tengah, Indonesia, ekele Sofia Nasharodin maka itinye ya. Ọ dị mkpụmkpụ mana dịka ị pụrụ ịhụ ụzọ na-amị amị nke jikọtara ya na gradient 1: 3 na enwere ike ịgbaghara onye na-eto eto a ma ọ bụrụ na ọ chọrọ nkwado.M nwere ọtụtụ ntinye sitere na UK mana ọkwa a sitere na Yandabear mere ka anyị banye na ọsụsọ. 100 yards nke cobbled obi ọjọọ na n'ime ime ụlọ nke Peak District na n'ebe ugwu England. - Ha! - Ikpe ikpe site na ndị na-emegharị emegharị anya n'isiokwu a, ọ ga-abụ nke dị larịị nke nwere oke nke 45 pacenti.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwọ ya n'onwe gị, ọ bụ akụkụ nke ihe omume egwuregwu Cheshire Cobbled Classic, nke na-eme na June. Nrịgo a bụ ugwu dị larịị kachasị elu na United States of America kwa afọ na Vermont Gran Fondo. Ọ bụ ezie na enwere ugwu dị elu na ndepụta a, ọ ga-esiri ike ịchọta ụzọ nke na-anọ na ọnụọgụ abụọ maka ogologo ahụ ọ ga-eme ka ọ dịrị gị mfe mkpọda ụkwụ.
Lou Mario gwara anyị banyere obere mma a dị n'etiti Porto. Ọ na-esite n'okporo ụzọ ahụ, ọ na-abanye n'okporo ụzọ a na-akpachaghị anya nke nwere okporo ụzọ anọ na-aga n'ihu. Naanị nkasi obi ọ bụ ọmarịcha nlele mara mma site n'elu.
Yaniv Yahouda zitere nke a site na Israel na mpụga obodo Ein Hud. (na-atụgharị uche) Ihe pụrụ iche banyere nke a bụ eziokwu na ị nwere ike ịga site na mmiri na-asọ asọ na mgbidi zuru oke na sekọnd. N'etiti ya, ọ na-ebelata ma bilie ọzọ na 20 pasent n'akụkụ elu ahụ.
Ọ dị mma ịsị na ọ ga - ewe ike site na mkpumkpu naanị iji mee ya n'akụkụ nke ọzọ. Ugbu a ọ gaghị abụ ndepụta nke ịrị elu dị elu ma ọ bụrụ na anyị akwụbeghị nleta na Belgium. Dabere na Cohen Monsieur, ụzọ a na-aga Saint-Vithis bụ kilomita kachasị elu na Ardennes, nke mara mma na-atụle etu mpaghara a si dị.
Nke ikpeazu sitere na Joseph Kendrick's Easy Finding Steep Hill n'obodo San Francisco, mana Joseph gara na acho uzo di nkpuru obula o gha acho ma o buru uzo ozo di nso na Broderick Street. Anyị hụrụ n'anya nsonaazụ ọma ka ọ bụrụ eziokwu. (mkpu) Ya mere, ga n'ihu, hel itoolu nke ịrị elu site n'akụkụ ụwa niile.
Kedu ihe bụ anya nke njem de France
You rịgoro otu n’ime ha wee chọta ihe dị larịị? Mee ka anyị mara na nkọwa dị n'okpuru yana ọbụlagodi zitere anyị foto na isiokwu gị na Facebook, Twitter na Instagram hashtag # GCNSTEEP. Onye maara, enwere ike anyị nwere ike ịme edemede ọzọ n'ọdịnihu. Maka ederede ndị ọzọ gbasara ịrị ugwu, lelee Tom Lastclimbing na Muro de Aia na Basque Country dị ka akụkụ nke usoro ịrịgo epic anyị.
A ghaghị ịhụrịrị ya iji kwere ya. Ọ bụrụ na ị nwetụla mgbe ị ga-eche ma ọ ka mma ịpụ na oche ahụ na ịrị elu 30, lelee nnwale sayensị Simon site na Jones Street na San Francisco.
Gịnị ka Flahute pụtara?
Ofdị onye na-agba ịnyịnya nke na-emeri n’ọsọ ebe ndị na-agba otu narị na iri ise bidoro ma otu mechara - nke ahụ bụFlahute. .B.Flahutena-eche na Tour de France bụ naanị ụyọkọ ọzụzụ ọzụzụ ogologo. g.
(Accordion Music) - Ọ bụ Tour de France oge, yana ma ị kpọrọ ya Tour de France ma ọ bụ Tour de France, ọ nweghị mgbapụ agbụrụ a na akara anwansi ọ na-apụghị izere maka ndị na-agba ịnyịnya na ndị na-abụghị ndị ịnyịnya na-enwekwa mmetụta nke Tour de France banyere asụsụ ịgba ịnyịnya ígwè. France nwere mmetụta akụkọ ihe mere eme na egwuregwu ahụ. Nke a pụtara na French bụ akụkụ nke okwu igwe bekee na asụsụ niile.
Ya mere (na-ekwu okwu n’asụsụ mba ọzọ) DS, nke pụtara (na-ekwu okwu n’asụsụ mba ọzọ) (na-ekwu okwu n’asụsụ mba ọzọ), nke sitere na Grand Prix Montagne, ma ọ bụ chammy, nke sitere na French chamois, pụtara akpụkpọ ewu chammy nke A na-eji ya na padding nke obere ịnyịnya ígwè ihe bụ n'ezie ntakịrị ihe arụ, ọ bụghị ya? Ka o sina dị, onye ọ bụla maara okwu ndị a. N'ezie, anyị anaghị achọpụta ha ọzọ. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite egwuregwu egwuregwu egwuregwu de de France, ị ga-enwerịrị ike (na-asụ asụsụ mba ọzọ) nke ka mma karịa nke ahụ.
Onweghị ihe na - agbakwunye ihe dị na cacheta gị nke onye na - ahụ Tourthan nwere ike (na - asụ asụsụ mba ọzọ). Ya mere, ebe a, dị njikere maka 2018 Tour de France, anyị na-ewetara gị ụfọdụ ịgba ịnyịnya ígwè (na-ekwu okwu n'asụsụ mba ọzọ) iji nyere gị aka ịda ụda dịka ezigbo onye maara egwuregwu ahụ. Ka anyị jiri okwu kachasị mkpa niile malite, (na-asụ asụsụ mba ọzọ). (Na-asụ asụsụ mba ọzọ) pụtara jersey, nke mere na (na-asụ asụsụ mba ọzọ) bụ akwa edo edo. (Na-asụ asụsụ mba ọzọ) bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke onye na-agba ọsọ. (na-asụ asụsụ mba ọzọ) bụ polka dot jersey, nke enwere ike ịtụgharị dị ka onye na-agba agba na peas na-acha uhie uhie n'ihi na peas na ntụpọ polka bụ otu okwu na French. (na-asụ asụsụ mba ọzọ) iji gosi jeshị ahụ.
Ma anyị na-ekwu okwu banyere ndị otu na-akwado ndị na-akwado egwuregwu karịa onye na-agba ọsọ agbụrụ. Nke a na-ezo aka na aghụghọ nke mwakpo ahụ iji mee otu ihe nkwụsịtụ n'isi ụtụtụ naanị iji nweta oge TV na enweghị olile anya mmeri ka ndị mmadụ wee hụ ọtụtụ ndị kwere omume. (Na-ekwu okwu n'asụsụ mba ọzọ) n'ụzọ nkịtị: ụgbọ elu ahụ.
Pụtara nkwụsịtụ (na-asụ asụsụ mba ọzọ) Enwere ndepụta niile nke okwu eji kọwaa ụdị ọkwọ ụgbọ ala. Ugbu a (na-asụ asụsụ mba ọzọ) ka a na-anụkarị n'asụsụ Bekee, ọ pụtakwara ezigbo gburugburu. A (na-ekwu okwu n'asụsụ mba ọzọ) bụ onye na-agba ọsọ ọsọ nke nwere ọkachamara na mpaghara ugwu ma na nkenke.
A (na-ekwu okwu n'asụsụ mba ọzọ) pụtara n'ụzọ nkịtị onye agha nke mere obi ike n'ikpeazụ. Yabụ na ịgba ịnyịnya ígwè ọ bụ Onye na-agba ịnyịnya na-eme mkparị dị egwu. A (na-ekwu okwu n'asụsụ mba ọzọ) bụ onye na-arị ugwu, yana n'ezie a (na-asụ n'asụsụ mba ọzọ) bụ onye na-agba ọsọ (na-ekwu okwu n'asụsụ mba ọzọ) azọpịa ma ọ bụ kụrie pedal iji nweta nnukwu na nnukwu mbọ Mgbalị iji mee . (na-ekwu okwu n'asụsụ mba ọzọ) Na-eme oke.
Ọ pụtara itinye pelotonin na eriri mmiri na ifufe. (na-ekwu okwu n'asụsụ mba ọzọ) N'ụzọ nkịtị, ịchụ nta nduku, nke a bụ ihe anyị ga-akpọ n'asụsụ Bekee, na-anọghị n'ala mmadụ. Onye na-agba ya n'agbata otu abụọ gbapụrụ na peloton, mana enweghị ike iru ndị gbara ọsọ n'ihu ha.
Nọgidesiri ike n'etiti, naanị ya, na-achụ ọsọ, o doro anya na ị na-achụ poteto. (na-asụ asụsụ mba ọzọ) A (na-asụ asụsụ mba ọzọ) bụ onye na-emebi emebi. Ọ pụtara usoro ịgba ọsọ nke mpaghara ahụ na-agbago na ala, ebe dị larịị, akụkụ, ihe siri ike, na-achọ ma na-achọ nnukwu itinye uche n'aka ndị ọkwọ ụgbọ ala na Ohere ole na ole maka ntụrụndụ. (Na-ekwu okwu n'asụsụ mba ọzọ) N'ụzọ nkịtị, a na-akpọ nkwakọ ngwaahịa maka mkpọsa na-agba agba ma na-akpọ mgbe ụfọdụ dị ka (na-asụ asụsụ mba ọzọ), dị ka a ga-asị na ọ na-eme ọsọ ọsọ na Bekee. (na-ekwu okwu n'asụsụ mba ọzọ) N'ụzọ nkịtị, onye ọkwọ ụgbọ mmiri na-agba ọsọ dị ka o kwere mee ruo n'ikpeazụ wee gbadata n'ọnọdụ kachasị mma iji merie agbụrụ ahụ. (na-asụ asụsụ mba ọzọ) salad igwe.
Mba, mba, obughi obere kalori nke onye okachamara ka na-agba oso. Na-eme ihe n'eziokwu, na njegharị ị ga-eri ọtụtụ calorie dị egwu. Ma n'ezie ọ pụtara a okuku na ìgwè mmadụ ahụ na tangle nke anyịnya igwe.
Ọ bụ n’ezie nkebi ahịrịokwu ị chọghị ịnụ. Voila. Ka anyị chee na nke a ga - enyere gị aka ịdị ka ezigbo ọkachamara ma ọ bụ onye maara njem nke ịgagharị ma mee ka ndị enyi gị nwee mmasị n'ịgba asụsụ gị (na-asụ asụsụ mba ọzọ). (Na-asụ asụsụ mba ọzọ) iji masị anyị ma pịa ebe a, ịhụ ihe ndị ọzọ gbasara ọdịnaya GCN's Tour de France.
aluminom na-agbagharị igwe
Kedu ihe bụ Baroudeur na ịgba ígwè?
Onye njempụtara onye agha ma ọ bụ dike na French. Ọ bụ okwu e ji mee ihe na yaịgba ígwèn'ihi na ndị na-agba ịnyịnya na-atụghị egwu ịhapụ peloton ma mee ihe n'onwe ha, ọbụlagodi na ha nwere ike ịbụ ndị dị n'okpuru.
Taa, ndị egwuregwu a ma ama ga-eme naanịkpochaa uwe ogologo ọkpa hagaa n'ihu. Buru n’uche ihe na-eme mgbendị na-agba ígwèamanye kakpochaa uwe ogologo ọkpa ha. Ndị ọkachamara na-asọ mpi ruo n'ókè na ahụ ha karịrị nrụgide - ọ na-adị ka ọ na-anwụ anwụ.07.21.2015
Kedu ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè si agbọọ?
Fọdụndị na-agba ịnyịnyakwụsị n'akụkụ ụzọ ịga maka apee. Peloton nwere ike ịhazi onwe ya, na-ahọpụta oghere 'okike ezumike' nke ogendị na-agba ịnyịnyaga-agbakọpee; na ọdịnala Grand Tour kwuru na onye ndu GC na-ekpebi mgbe nke a ga-abụ.
mgbe ekele nri abalị
Cycgba ígwè ọ na-emetụta mmegharị afọ?
Ihe bụ isi:Cygba ígwèna-eme ka usoro nri gị ghara ịdị n'ihi na ahụ na-eme ka ọbara na-asọba na mmega ahụ gị ma chefuo ihe ọkụkụ na-eme ka ị ghara.Mar 29 2017
Kedu obodo ama ama maka ịgba igwe?
Denmark. Denmark na-ewerekarị okpueze maka ịbụ ihe kachasị mmaobodon'ụwa n'ihi nandị na-agba ígwè,, ka ọ na-aga n’ihu na-eme ihe dị mkpa iji tinye njikwa n’elu igwe na-aga. Obereobodoobụrede mbụre karịrị 12,000km nkeokirikiriụzọ gasị, yana raara onwe ya nyeịgba ígwèàkwà mmiri ndị dị n’obodo ndị dị ka isi obodo, bụ́ Copenhagen.Ọnwa Ise 31, 2018